Wasaarada Dhalinyara​da Puntland oo Dhaliyarad​a Uga Digtay Tahriibta – SBC
Wasaarada Dhalinyara​da Puntland oo Dhaliyarad​a Uga Digtay Tahriibta
Posted by Webmaster on August 5, 2012 Comments
Qaar ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada Garowe ayaa maantaka qeybgalay kulan looga hadlyaya Qatar uu leeyahy tahriibta Iyo Looga Wacyigalin lahaa Falalka Tahriibta ah oo ay Dhalinta soomaaliyeed Ku Howlan Yihiin.
Ujeedka loo qabtay kulankaan aya waxaa lagu sheegay inuu yahay midla doonayo sidii dhalinyarada ku dhaqanmagaalada Garowe looga wacyi gelin lahaa ka fogaanshiyaha dhibta ay khatart tariibtu ay leedahay.
Kulan oo aha mid hal maalin soconayo ayaa waxaa ka qeybgalay xubnoka tirsan wasaarada shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha Puntlandqeybaha kale ee bulshada ku dhaqan magaalada Garowe iyo xubno ka tirsan urukaDaryeelka oo kulankii maanta soo qaban qaabiyay Iyadoona Kulankaan Mid La mid ahna Uruurka Horay Uga Soo Qabtay Deegaanka Tuqaraq ee Gobolka Sool.
Kulankaan oo ahaa mid dood wadaag ah oo dhalinyaradu ay ku kalefikrad qaadanayeen sidii ay uga digtoonaan lahaayeen qatarta ay tahriibtaleedahay iyo in nafta lagu haligo biyaha u dhaxeeya Taltaniga iyo Libia.
Wasiir ku xigeenka wasaarada shaqada shaqaalaha dhalinyarada iyociyaaraha Puntland siciid dahir qodox oo ugu horeyn kulanka ka hadlay ayaadhalinyarada ugu digay in ay naftooda si sahlan ugu biiimeeyaan qatartatahriibta ay leedahay iyo in ka fogaadaan biimeynta naftooda.
Kulankaan maanta ka dhacay magaalada Garowe ayaa waxaa uu imaanayaaiyadoo dhalinyaro badan oo soomaali ah ay ku xiran yihiin wadamada liibiya iyotalyaaniga halka kuwa kalena iyagoo nolol dhanta tan soomaalia raadinaya kuhaligmeen biyaha u dhaxeeyay liiba iyo talyaaniga.
Cabdi Caziiiz Ibraahim Axmed (Okey)